Maxaa Ka Cusub Kismaayo ? – Radio Daljir
Maxaa Ka Cusub Kismaayo ?
Oktoobar 6, 2015 5:33 b 0
Talaado, Oktoobar 06, 2015 (Daljir) —Magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar ka ah ee Jubbaland waxaa laga hadal hayaa golaha wasiiradda oo dhawaan la filayo inuu ku dhawaaqo Madaxweyne Axmed Madoobe.
Goobaha lagu qaxweeyo ayaa dadku iswaydiinayaan wasiirada uu soo magacaabi dono Axmed Madoobe, iyo cida ay isleeyihiin waa laga yabaa in Madaxweynuhu uu soo magacaabi doono,xubno ka tirsana wasiiradii hore iyo kuwo cusub ayaa Kismaayo laga hadal haya inay noqon doonaan Wasiirada Cusub.
Wasiiro uu kamid yahay sii hayaha wasiirka arimaha gudaha iyo amniga Gen.Maxamed Warsame Darwiish ayaaa la hadal hayaa in Madaxweyne Madoobe uu dib usoo magacaabi doono,sidoo kale siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolk a Geddo ayaa la filayaa inay ka dhexmuuqdaan Wasiirada cusub ee Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa hada ku jira la tashiyadii ugu dambeeyey oo qaybaha bulshada uu la yeelanayo,isagoo xili yar uu uga haray wakhtigii Baarlamaanka Jubbaland ay siiyeen si uu usoo dhisto wasiirada.
Beelaha qaarkood ee daga Jubbaland ayaa wasiiradii hore ee Axmed Madoobe soo dhisay aan ku qancin, iyagoo sheegay inaysan ka dhexmuuqan ,waxaana dadku iswaydiinayaan Axmed Madoobe ma qancin doona beelahaas?.
Magaalada Kismaayo waxaa maal mahan lagu arkayey qurba joog ka yimi dalalka Caalamka,kuwaas oo dadku hadal hayaan inay doonayaan wasiiro inkastoo aan la hubin in madaxweyne Madoobe uu uyeeray iyo in kale.
Dhanka kale waxaa dhawaan la filayaa in la qabto doorashada Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo ay u tartamayaan labadii ku xigeen ee hore .
Dastuurka cusub ee dhawaan ay meel mariyeen Baarlamaanka Jubbaland ayaa dhigaya in Jubbaland ay yeelato hal madaxweyne ku xigeen,waxayna ilo dhow Baarlamaanka Jubbaland ay noo sheegeen in xilka uu ucad cad yahay Gen Cabdullaahi Shiikh Ismaaciil Fartaag.
Xeerka Kufsiga oo looga Dooday Garowe